IiNtetho zeBile Acid-i-Hangzhou Spring Biotechnology Manufacturer & Supplier
Abathengi bafuna iiproteni zezilwanyana kunye neemveliso ezingenazo ii-antibiotics.
I-BioGro® yiSpringbio izongezo zokutya ziphuhlisiwe njengoko abathengi bafuna izithako zendalo ezingakumbi.I-BioGro® ibonelela ngemidibaniso yobunini be-Bile acid njenge-emulsifier enemisebenzi eqinisekisiweyo ngokwesayensi:
I-bile acids zezona zithako ezisebenzayo zenyongo, eyona nto idibanisa i-sterols ene-bioactivities ezininzi.
Umxholo wemveliso: 30% bile acids
I-BioGro®-BILE ITHETHA NGE-ACID
1. Ukukhuthaza ukucolwa kwamafutha kunye nokufunxa
Iiasidi zeBile zinesakhiwo se-biosurfactant samafutha esibangela ukuba amanqatha enziwe emulsified abe ngamathontsi emicroscopid.Yandisa kakhulu indawo yamanqatha, iyenze ifumaneke ukucolwa yi-lipase.
2. Vula i-lipase
I-bile acids inokutshintsha ukwakheka kwe-lipase xa idibanisa kwiimicelles ukugqiba inkqubo ye-fat hydrolyzation.
3. Ukukhuthaza ukufunxa kwamafutha
Indibaniselwano ye-bile acids kunye ne-fatty acids, inokwenza lula ukuba iiasidi ezinamafutha zifikelele kumphezulu we-intestinal villus encinci kwaye zingene egazini.
4. Ukunciphisa idiphozithi ye-fat esibindi kunye nokukhuthaza i-compound ye-VLDL, ukukhusela i-fatty syndrome yesibindi;
5. Ukukhuthaza ukukhutshwa kwenyongo kwaye ukhulule umthwalo onzima wesibindi;
6. I-Detoxification, i-bile acids inganceda ukudibanisa kunye nokubola i-toxins, njenge-mycotoxins, i-endotoxins ezenza umonakalo omkhulu esibindini namathumbu.
Ibroiler kunye nedada
1. Ixabiso eliphantsi lokutya, i-ME inokuncitshiswa nge-30-60 kcal.
I-2.Ukuphucula ukusebenza kokukhula, i-FCR inokuphucula i-6% -12% kwaye ixesha lezindlu lingancitshiswa iintsuku ze-1-2 kunye nobunzima bomzimba ofanayo.
3.Ukuphucula ukusebenza kokuxhela, izinga le-carcass lingaphuculwa nge-1% -1.5%.
I-1.Kwi-shrimps kunye nezinye ii-crustaceans ezingenakufihla i-bile salts kunye ne-cholesterol, ukongeza i-Bile acid inokukhuthaza i-metamorphosis kwaye inciphise ixesha lokunyibilika.
2.Buyisela indawo ye-cholesterol, unciphise iindleko zesondlo.
3. Khusela impilo ye-pancreas kunye namathumbu, izinga lokusinda linokuphuculwa nge-10%.
4. Ukwandisa amandla okulwa noxinzelelo lwe-shrimp kunye nokunciphisa umngcipheko wokuqhambuka kwesifo esibalulekileyo njenge-EMS/EHP/ilindle elimhlophe.
1. Ukukhuthaza ukugaya kunye nokufunxa kwamafutha, ukuphucula ukusetyenziswa kwamafutha kunye nezinye izondlo;
2.Isisombululo esisebenzayo kwi-trophic diarri-hea, ngakumbi ngexesha lokulunyulwa, izinga lohudo lwetrophic lunokuthotywa nge-5-10%;
I-3.lmprove intsebenzo yokukhula, izinga lokufumana ubunzima bemihla ngemihla linokuphuculwa ngo-8-15%, i-FCR inokuphuculwa nge-5-10% yokukhuthaza ukukhula kunye nokunyusa ukutya.
4.Kwiihagu, ukongeza i-bile acids kunokuphucula umgangatho wobisi lwehagu, olusebenzayo kwizinga lokusinda kweehagu kunye nobunzima bokuzala..
1. Ukuphucula ubunzima bemihla ngemihla nge-15-20% ngokuphucula i-lipids absorption.Phucula i-FCR nge-15% ubuncinci, ngokucacileyo ukwandisa ukutya, ukunciphisa umjikelo wokuxhela ngokudibanisa rhoqo.
2.1ukuphucula umgangatho wokuxhela, ukunciphisa amanqatha angaphantsi kwesikhumba, ukwandisa amanqatha phakathi kwezihlunu, ukuphucula izinga le-carcass.
3.Ukuphucula ukukhuseleka kweenkomo neegusha zenyama, ukunciphisa ukugula.
Amacwecwe eCurcumin Piperine Astaxanthin Beadlet Astaxanthin Powder ICurcumin yeTurmeric ICurcumin ICurcumin Piperine Capsules